Kuphi kwaye nini ukubona iApple Keynote apho babonisa khona i-iPhone X | Iindaba zeGajethi
Nge-12 kaSeptemba ngo-19: 00 ebusuku ixesha laseSpain, yenye yezona zinto kulindelweyo kwezobuchwephesha kulonyaka ziya kuqala, umsitho apho iApple iceba ukwazisa ngokusesikweni i-iPhone X kunye nabantakwabo zincinci, I-iPhone 8 kunye ne-iPhone 8 Plus. Lo msitho uza kugxila kwizibuko lehlabathi kwaye ukhubaze zonke iwebhusayithi zetekhnoloji ubuncinci iyure enesiqingatha.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ungawulandela njani umcimbi we-Keynote bukhoma? Sikuzisa iishedyuli eziphambili ezivela kwihlabathi liphela kunye nokunxibelelana okuyimfuneko ukuze ukwazi ukulandela le ntetho, yiza ufumane.
Okokuqala kuyo yonke iwebhu, siza kuyenza ikhava ephilayo eya kufumaneka kuzo zombini iActualidad Gadget nakwiiwebhusayithi zoodade wayo, iActualidad iPhone kunye neSoy de Mac. Eli phepha liza kuba luxanduva lwababhali kunye nathi kwaye baya kugqithisa ngomzuzu ngomzuzu kunye nemifanekiso yonke into eyenzekayo eSteve Jobs Theatre eCupertino, ke uya kuhlala unolwazi kwangoko. Ngendlela efanayo, siza kukubonelela ngomxholo ngohlobo lwezithuba ngaxeshanye, ukuqokelela isixhobo ngasinye kunye neendaba eziphambili.
I-iPhone X iya kufaka iprosesa yokuqala ye-hexa-core ye-Apple, i-A11 Fusion- https://t.co/JpAMAy6OxZ pic.twitter.com/NPQZypwmaB
Iindaba zeGadget (@agadget) Septemba 11, 2017
IiNethiwekhi zeNtlalo zinokuba liqabane lakho elithembekileyo, iTwitter yeActualidad Gadget (@agadget) kwaye enye isuka kwiActualidad iPhone (@a_iPhone) Baza kusasaza ngexesha lokwenyani le nto siyibonayo ngosasazo oluhlala lubonelelwa yiApple ukwenza intetho yabo. Ke, ulumke kwaye uqale ukulandela thina kwi-Twitter ukuba awufuni kuphoswa nayiphina into.
Ewe, iApple iza kubonelela ngokusasaza kweyona miboniso ingqongqo apho sinokubona yonke into ebonisiweyo, ngokungathi besilapho. Sikushiya ngezantsi kwekhonkco apho kufuneka ucofe khona ukuba ufuna ukubona i-Keynote ngentetho esemthethweni. Ngaphandle, Olu sasazo lungesiNgesi, kunye nemibhalo engezantsi ngesiNgesi, ulwimi olusemthethweni eMelika., ilizwe elazala iApple, ibinokuba ngenye indlela njani. Ke ngoko, ukuba awuthethi kakuhle isiNgesi, sicebisa ukuba uthathe ithuba lekhava yethu kunye neeNethiwekhi zethu zeNtlalo ukuze ungaphoswa naziphi na iinkcukacha ezinokuba ezifanelekileyo.
Qhagamshela ukubukela ividiyo yeApple Keynote > LINK
Ngaphandle kokuqhubela phambili, siyathemba ukuba ukhethe iActualidad Gadget njengeyona ndlela uyithandayo yolwazi yokwazi zonke iindaba malunga ne-iPhone X, iApple Watch Series 3 kunye neApple TV 4K eya kuthi ifike kwintetho ngomso. Sikushiya neeshedyuli eziphambili ezivela kwihlabathi liphela Ukuze wazi ukuba leliphi ixesha ekufuneka unxibelelane nathi kwezona zinzima ngokuthe ngqo.
Iiyure ze-Apple Keynote
Amsterdam (Holland) ngo-19: 00 ebusuku.
Ankara (Turkey) ngo-20: 00 ebusuku.
Atenas (Grisi) ngo-20: 00 ebusuku.
Beijing (China) ngo-01: 00 ngoLwesithathu
IBelgrade (eRashiya) ngo-19: 00 ebusuku.
IBoston (eUSA) ngo-13: 00 emva kwemini.
I-Brasilia (eBrazil) ngo-14: 00 emva kwemini.
IBucharest (eRomania) ngo-20: 00 ebusuku.
IBudapest (eHungary) ngo-20: 00 ebusuku.
ICairo (i-Egypt) ngo-19: 00 ebusuku.
Caracas (Venezuwela) ngo-13: 00 ebusuku.
Casablanca (Morokho) ngo-18: 00 ebusuku.
IChicago (eUSA) ngo-12: 00
ICopenhagen (eDenmark) ngo-19: 00 ebusuku.
IDubai (i-UAE) nge-21: 00 pm
Hong Kong (HK) ngo-01: 00 ngoLwesithathu
La Habana (Tyhubha) ngo-13: 00 ebusuku.
Lisboa (Photshugo) ngo-18: 00 ebusuku.
Lima (Peru) ngo-12: 00 ebusuku.
ILondon (EUnited Kingdomngo-18: 00 emva kwemini.
Mexico City (Mexico) ngo-12: 00
Miami (USA) ngo-13: 00 ebusuku.
EMoscow (eRashiya) ngo-20: 00 ebusuku.
ENew York (eUSA) ngo-13: 00 emva kwemini
Oslo (eNorway) ngo-19: 00 ebusuku.
EParis (Fransi) ngo-19: 00 ebusuku.
EPrague (iCzech Rep.) Ngo-19: 00 ebusuku.
eRoma (E-Itali) ngo-19: 00 ebusuku.
I-Cupertino (iSan Francisco-USA) ngo-10: 00
ISanto Domingo (Republic Dominican) ngo-13: 00
Santiago (Tshile) ngo-14: 00
Seoul (South Korea) ngo-02: 00 ngoLwesithathu
USofia (Bulgaria) ngo-20: 00 ebusuku.
Sydney (Australia) ngo-03: 00 ngoLwesithathu
E-Tokyo (eJapan) ngo-03: 00 ngoLwesithathu
IWarsaw (ePoland) ngo-19: 00 ebusuku.
I-Zurich (Swizalend) ngo-19: 00 ebusuku.
Isi-Asunción (Pharaguwayi) ngo-13: 00 ebusuku.
Bogotá (Kholambiya) ngo-12: 00 ebusuku.
Buenos Aires (Ajentina) ngo-14: 00 ebusuku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Kuphi kwaye nini ukubona iApple Keynote apho babonisa khona i-iPhone X
UWiko Lenny 4, iselfowuni eyimpumelelo ye-120 euro
Ngqamanisa i-iOS okanye i-Android Izaziso nge Windows 10